जापानमा COVID-19 समाचार तथा जानकारी | COVID-19 多言語情報ポータル
जापानमा COVID-19 समाचार तथा जानकारी
हामीले ग्रेटर टोकियो क्षेत्र (टोकियो, साइटामा, चिबा र कानागवा) का निवासीहरूका लागि COVID-19 सँग सम्बन्धित बहुभाषीय जानकारी उपलब्ध गराउँदै छौं।
यो जापनामा बस्ने विदेशीहरूका लागि सहायता गर्ने टोकियो वैदेशिक शिक्षा विश्वविद्यालय (TUFS) का विद्यार्थी र स्नातकहरूद्वारा सञ्चालित एक अनाधिकारिक वेबसाइट हो।
नोट: हामी प्रत्येक दिन जानकारी अद्यावधिक गरिरहेका छौं तर कृपया यहाँ केही लेखहरू अति नवीतनम हुन सक्छन् भन्ने थाहा पाउनुहोस्।
मे 25 मा, जापानी सरकारले आपतकालीन स्थिति समाप्त गर्‍यो। जुन 19 मा, एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तको गतिविधि प्रतिबन्धलाई पनि समाप्त गरिएको थियो।
यद्यपि, हामी COVID-19 का जोखिमहरूदेखि सतर्क रहनुपर्नेछ। बाहिर जाँदा मास्क लगाउनुहोस् र आफ्ना हातहरूलाई बारम्बार रूपमा धोइराख्नुहोस्। तपाईंले अन्य व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा2मिटरको सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ।
साथै, कृपया गर्मीसँग सम्बन्धित बिमारीहरूदेखि सावधान रहनुहोस्। हाइड्रेटेड रहनको लागि प्रसस्त मात्रामा पानी पिउनुहोस्। आफ्नो मास्क निकाल्नुहोस् र तपाईं सामाजिक दूरी कायम राख्न सक्ने स्थानहरूमा आराम गर्नुहोस्।
तपाईं कस्तो प्रकारको जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?
शिक्षा र अनलाइन शैक्षिक सहायता
पसल र भण्डार पसल बन्द/व्यवसायिक समय
हाम्रो Twitter र Facebook पृष्ठका अद्यावधिकहरू पछ्याउनुहोस्!
कृपया आफ्ना साथीहरूसँग हाम्रो वेबसाइट साझा गर्नुहोस्।
हामीले अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध हुँदा पनि घोषणा गर्नेछौं।